1. FDA no nahazo ny rongony fidiram-bola: Lorcaserin HCL
3. Mpikatroka ny asa
4. Ahoana ny fomba hakana anao
5. Didy malaza
7. Fanolorana fanampiny amin'ny Lorcaserin
8. Ny fiantraikan'ny mpivady
10. Tsara ny fanesorana ny mpivarotra
11. Fanamarihan'ny mpivarotra avy amin'ny Obeses
12. Loraxerin supplement
13. Buy Lorcaserin HCL Online
FDA no nahazo ny rongony fidiram-bola: Lorcaserin HCL
Mitady fomba azo antoka amin'ny fahazoana lanjany ve ianao raha tsy mitaingina lozam-pifamoivoizana momba ny asa marevaka sy tsy mahasoa? Andramo levitra discount presciptions. Fantaro ny fahombiazan'ny famenon-tsakafo, ny lekcaserin ny hetsika, ary ny antony nahazoany ny fankatoavan'ny FDA.
Amin'izao fotoana izao, manodidina ny 31% amin'ny vahoaka amerikana dia maharesy lahatra na mavesatra. Ny antontan'isa fanampiny dia manamafy fa ny 69% ny olon-dehibe efa mihoatra ny 20 taona dia marefo na matavy. Midika ara-bakiteny fa midika izany fa amin'ny olon-dehibe 10 ao anatin'io taonany io dia azonao atao ny manonona ireo niharan'ny 6. Ny momba ny 30% amin'ny lisea avo lenta na matavy loatra.
Ny fomba tokana azo antoka hifehezana ny vatana dia amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena tsy tapaka, planeta diabeta, fandidiana tarika na fampiasana zava-mahadomelina. Na dia mahomby aza ny fako miaro amin'ny fanafody vitsivitsy, dia voan'ny aretim-po izy ireo. Ankoatra izany, nisy ny ahiahy maromaro mikasika ny olana ara-pahasalaman'ny saina.
Hatramin'ny 2012, supplement lorcaserin, fantatra ihany koa amin'ny hoe Belviq, dia tsy fanafodin-tsakafo lalandava loatra noho ny antony tsy voamarina ara-pahasalamana. Kanefa, ny fikarohana Amerikana natao tamin'ny olona maromaro dia nanaporofo fa azo antoka sy mahomby io pilina io ary tsy misy fiantraikany ara-pahasalamana lehibe eo amin'ny fony. Ireo mampiasa azy io dia mety hamoy ny 5 -10% eo amin'ny lanjany amin'ny vatany, raha toa izy ireo manao hetsika ara-batana sy fihinanana kalôria.
Noho izany, inona no fahasamihafana misy eo amin'ny matavy loatra sy ny lanjany? Raha mihoatra ny 30kg / m ny mari-panondro'ny vatanao (BMI)2, dia mendri-piderana ianao. Raha miova ny sandan'ny 25 sy 29.9kg / m2, izany hoe ambony loatra. Ahoana ny fiasan'ny Synephrine HCL eo amin'ny vatanao?
Tsy mazava tsara ny antony fototry ny vatana, saingy ny antony dia mitodika any amin'ny fototarazo, metabolic, physiological, ary fitondran-tena. Ny fahasarotan'io toe-javatra io dia mitondra amin'ny diabeta mellitus, aretim-po, hyperlipidemia, apnea, aretin'ny ati-doha, hypertension, ary kanseran'ny sasany.
Ny fikarohana Amerikana dia mamoaka ny fiarovana amin'ny fitsaboana ho an'ny hormonina
Ny FDA dia tsy nankasitraka ny fampiasana ny lorcaserin afa-tsy noho ny fangataham-bahoaka na ny fahombiazany amin'ny fampihenana ny rongony. Ny tena zava-dehibe nahatonga ny fankatoavana azy dia ny fikarohana Amerikana lehibe natao tamin'ny taona 3.3.
Raha jerena amin'ny fianarana navoaka tao Ny New England Journal of Medicine, Ny lorcaserin dia manaporofo fa mahasalama mahomby amin'ny fitantanana ny lanjany ho an'ny marary sy ny marary.
Ireo mpikaroka dia nifidy avy hatrany ny marary 12000 izay tsy ampy loatra fa voan'ny aretim-po hafa ihany koa. Avy amin'ity vondrona ity, ny sasany tamin'ireo olona dia voatendry handray isan'andro lorcaserin dosage raha ny ambiny kosa naka plasebo.
Taorian'ny herintaona, ny 39% tamin'ireo marary dia nanome lorcaserin sy 17% ny olona ao amin'ny vondron'ny placie dia nanangona farafahakeliny 5% ny fatiantoka. Toy ny hoe tsy ampy izany, ny vondrona lorcaserin dia atahorana kokoa ny hampivoatra ny diabeta na dia misy paty sasany aza dia hiafara amin'ny hypoglycemia.
Raha nisy fampitahana natao teo amin'ireo mpandray anjara naka lorcaserin sy ireo tao amin'ny plasebo, dia tsy nisy ny firaketana an-tsoratra momba ny aretim-pon'ny kansera amin'ny vondrona. Ny solontenan'ny lorcaserin ihany no manatsara ny lanjany raha oharina amin'ny fomba hafa.
Mpitsabo aretim-po sy aretim-po
Noho izany, nahoana ny olona no nividy ny hevitra hoe ny loccaserin dia mifamatotra amin'ny fanodikodinan'ny fo ve? Mamelà ahy hanazava ...
Misy karazana 14 isan-karazany ny mpanapa-tsoratra 5-HT ao amin'ny rafitra olombelona. Ny maha-agonista serotonin 2C, dia mikendry ny 5-HT ny lorcaserin2C mpitsabo ny rafi-pitabatabana. Fa avy eo, ity mpandray ity dia mifandraika amin'ny 5-HT2B ary 5-HT2A mpandray.
Izany hoe, raha 5-HT2C dia manintona, ny mpikirakira hafa dia manana ny lanjany mitovy amin'ny mavitrika. Izany matetika no mahazatra amin'ny serotonin-weight-medication, noho izany, ny fihanaky ny valin'ny valin'ny fo sy ny fiovan'ny tosidra eo amin'ny mpampiasa.
Amin'ity tranga ity, ny fiarahan'ny lorcaserin amin'ny 5-HT2C dia 100x ambony noho ny 5-HT2B mpandray. Ny dose isan'andro dia tompon'andraikitra amin'ny firaisana mifamatotra. Raha mihoatra ny fetra ianao, dia hihoatra ny fetra ary ny vola fanampiny dia tsy maintsy mifatotra amin'ny sisa amin'ireo mpandray. Na izany aza, ny fampiatoana ny 5-HT2B dia miteraka aretim-po ny valvular, ny fanentanana 5-HT2A Mitarika ho amin'ny fihetseham-po ny fihetseham-po, mahatsapa 'avo', euphoria, ary hallucinations.
Amin'izao fotoana izao, levitra discount presciptions no hany fitsaboana manentana ny 5-HT2B Tsy misy loza mety hitera-doza na aretina hozatra.
Ny Fitsaboana Sakafo sy ny Fanafody (FDA) dia nankatoavina tamin'ny alàlan'ny 2012 ny taratasy nosoratan'i Belviq ho an'ireo marary olon-dehibe amerikana. Ity fanomezan-dàlana ity dia nitranga telo taona taorian'ny nanambaran'ny Arena Pharmaceuticals sy Eisai Inc. NDA (Fampiharana fanafody vaovao) ho an'i Lorcaserin. Nalain'ny FDA nandritra ny roa taona ny fampiroboroboana ny angon-drakitra, anisan'izany ny fanadihadiana momba ny fitsaboana mifandraika amin'ny lorcaserin, alohan'ny hanomezana ny fitsarana farany.
Efa ho roapolo taona izao no i Belviq no voalohany lasibatra mba hahazoana ny fankatoavan'ny FDA. Na dia dokotera manana fahazoan-dàlana any Etazonia aza izy io, mbola tsy nankatoavina tany Eorôpa.
Ny hydrochloride ao Lorcaserin dia singa fototra miorina amin'ny klonin'ny agonista mpandray ny serotonin. Kitapo simika misy CAS izy io 846589-98-8
Alefaso amin'ny famaritana amin'ny antsipiriany momba ity chimie ity ...
Anarana simika (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
Teboka (° C) 193 - 200
Solitany (25 ° C) - Rano
Storage mari-pana -20 (° C)
Action Serotonin 2C agonist receptor
· Lamesa HCL
· (R) -1H-3-benzazepine, 8-chlor-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride
Mariho fa lorcaserin hydrochloride dia singa mampiavaka ny pharma. Na dia azo alaina mora indrindra amin'ny fivarotam-panafody simika aza izy io, dia tokony hampiasaina amin'ny fikarohana momba ny laboratoara, ny fampandrosoana ary ny zava-mahadomelina. Tsy natao ho an'ny fampiasan'ny olombelona izany, ka noho izany, tsy mahafeno fivarotana ho an'ny marary.
Lorcaserin levitra Safety Data Sheet
Mifanaraka amin'ny rafitry ny GHS ny lhlcaserin hydrochloride dia sokajy IV. Manana ny fehezan-dalàna; H302, P264, P301, P312, ary P330. Mety miteraka ranon-javatra, na voka-dratsiny, na fitondrana mivantana amin'ny hoditra izany.
Ireo fepetra fanampiana voalohany
Raha sendra manala lorcaserin, dia sasao ny vavan'ny tra-boina miaraka amin'ny rano madio. Tohizo ny fanesorana ny minitra 15 manaraka, raha toa ka mahatsiaro saina ilay olona. Aza manandrana manolotra fitantanana am-bava raha misy olona tsy mahatsiaro tena.
Raha latsaka eo amin'ny hoditra ny rano, dia misy rano madio sy savony matevina. Raha eo amin'ny maso dia ampiasao rano rano mba handroana azy ireo mandritra ny minitra 15. Ny laboratoara fikojakoja tsara indrindra dia nametraka oram-panandramana ara-pahasalamana sy fialan-tsiny mba hahazoana fahafaham-po rehefa manatanteraka valiny maika.
Raha sendra misy lhlcaserin HCL, dia alefaso any amin'ny efitrano misy rivotra madio izy ireo. Raha toa ka sarotra ny mifoka rivotra, ampiasaina amin'ny atidoha ary mitady fanampiana ara-pitsaboana.
Mitafy lobaka, solomaso fiarovana, ary fiarovana amin'ny simia. Ampiasao koa ny respirator, izay nohamarinin'ny NIOSH.
Fitantanana sy fitehirizana
Aza atsofoka ao anaty laboratoara ny rivotra, ny setroka, ny vovoka, ny solitany, na ny zavatra hafa any amin'ny rivotra. Amboary ny fotoana ifindrana araka izay azo atao. Mandritra ny fitahirizana dia miantoka ny fitahirizana lorcaserin ao anaty container-tsefaka ary manidy azy amin'ny fomba azo antoka amin'ny mpampiasa laboratoara hafa.
Ny mpivaro-tena dia miorina eo ambany fehezan-dalàna sy fehezan-dalàna. Na izany aza, tokony tokony hitazona azy amin'ny fatran'ny oxidants mahery ianao satria mety hiteraka vokatra ny vokatra. Ny ampitsim-bary dia ny okonton-tsolika, ny gazy karbonika, ny gazy karbonika, ary ny chloride hydrome.
Mpikatroka ny asa
Lorcaserin dia serotonine 2C agonist receptor. Ny zava-mahadomelina dia manana fifandraisana goavana ho an'ny olombelona 5-HT2C. Izy io dia mikaroka vaksiny manokana amin'ny hypothalamus, izay tompon'andraikitra amin'ny fialamboly.
Omeo ahy hanazava izany siansa izany ... Mifandray amin'ny Central System Nervous System (CNS) ny Belviq, indrindra fa amin'ny hypothalamus. Ny zava-mahadomelina dia mikendry ny 5-HT2C mpitsabo, izay hita eo amin'ny neurons pro-opiomelanocortin ao anatin'ny biriky biriky. Ity fihetsika ity dia manosika ny famotsorana ny alpha-MSH, izay hormonina mihetsika amin'ny melanocortin-4-receptors hanafoanana ny filan'ny olona. Ity ampahany amin'ny atidoha ity dia mametra ny hanoanana toy izany, rehefa ahemotra, dia hanambara ny vatana izay efa feno ny ankamaroan'ny fotoana.
Rehefa tapaka ilay izy, dia mihena ny fihinanana sakafo ary mitondra fahatsapana fihinana. Na dia mbola hihinana sakafo ara-pahasalamana ambany kaloria ianao, Belviq dia hifehezanao ny fanirianao. Ho feno tanteraka ny fihinanana azy. Torolàlana momba ny tombotsoan'ny Ipamorelin sy ny fampiasana Ipamorelin
Ny fitsaboana mahatsiravina, ny fitsaboana dia manamaivana ny fahavoan'ny lanjan'ny marary sy ny marary. Ankoatra izany dia manampy amin'ny fitantanana ny fepetra mifandraika amin'ny lanjany toy ny fiakaran'ny tosidra, ny aretim-po, ary ny diabeta II.
Ho an'ity zava-mahadomelina mahomby ity, ny iray dia tokony hampiditra ny asa atao ara-batana sy ny drafitra ara-tsakafo ara-pahasalamana eo amin'ny fahazarana. Tsy misy fikarakarana manokana hanarahana izany fa ny fifikirana amin'ny kalôria ambany dia mety hahasoa. Raha toa ianao ka mitantana mandrakariva ny lancastererin amin'ny taona iray manontolo, dia ho very ny salan'isa 3.5% amin'ny lanjan'ny vatanao voalohany.
Na izany aza, misy tranga sasany mahazatra izay tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny zava-mahadomelina. Raiso, ohatra, ny fampiasanao amim-pahatokiana ny zava-mahadomelina mandritra ny efa ho telo volana, fa tsy misy fiovana hita eo amin'ny vatanao. Eny ary, io no teboka tokony hijanonanao amin'ny fitsaboana sy hamonjena anao amin'ny fanelingelenana bebe kokoa. Raha tsy afaka mamoy ny vidiny ara-dalàna ianao amin'ny faran'ny herinandro faha-12, tsy misy fanantenana hahazo tombony amin'ny zava-mahadomelina intsony.
Fomba ahoana no haka an'i Lorcaserin
Araka ny voalazan'ny fenitry FDA, tokony ho azon'ny olon-dehibe ihany ny lolcaserin amin'ny BMI amin'ny 30kg / m2 ary ambony. Raha mijaly noho ny diabeta diabetika karazany roa ianao, ny fiakaran'ny tosidra, na ny aretim-po, dia mbola azo ampiasaina ny zava-mahadomelina raha toa ka ny BMI dia farafaharatsiny 27kg / m2.
Ny marary dia tokony haka takelaka 10mg iray isan'andro indroa isan'andro araka ny torolalan'ny dokotera. Ny tsara indrindra dia ny tokony hitondranao ny fanafody amin'ny fotoana voafaritra tsara. Afatory ny takelaka manontolo tsy misy mena na mamotika azy. Azonao atao ny mandray ny dosie mitaiza na miaraka amin'ny sakafo tsy miankina amin'ny soso-kevitrao na ny fanolorana ny dokotera.
Raha tsy nahazo torolalana ampy avy amin'ny dokotera ianao, dia afaka manamafy foana ny mari-pamantarana. Aza manadino na oviana na oviana mihoatra ny zavatra nosoratanao satria mety hanelingelina ny valiny ianao.
Manolo-tena ny hitondra Belviq mandritra ny androm-piainany manontolo mba hanoherana ny sasany amin'ireo aretina mifandray amin'ny lanjany. Raha tsy efa nanoro hevitra ny dokotera ianao, dia tsy tokony hijanona mihitsy lorcaserin levitra.
Tsy nahavita dose ve ianao? Alao sary an-tsaina avy hatrany izany eritreritra izany. Na izany aza, rehefa efa antomotra ny dosage manaraka, dia manohy hatrany amin'ny fandaharam-potoana tsy tapaka ary manadino ny tsy ampy dosie.
Raha toa ianao ka mamolavola anao kokoa noho ny tabilao Belviq, dia mety hahatsapa soritr'aretina lehibe ianao sy ny vokany hafa aorian'izay. Raha sendra tafahoatra ianao, dia asio marika eo amin'ny toby fanaraha-maso misy poizina, alohan'ny hitsidihan'ny dokotera anao. Ny laharana fanampiana dia 1-800-222-1222.
Ny sasany amin'ireo soritr'aretina dia mety hahitana ny fiovaovan'ny fihetseham-po, ny fitabatabana, ny hafanam-po, ny fahatsapana ny fanaintainana ambony, ny alahelo ao amin'ny vavony, Amin'ny tranga faratampony toy ny fanenjehana, ny fahasarotan'ny rivodoza na ny fihorohoroana dia mameno ny 911 ho an'ny serivisy vonjy taitra. Nahoana i Sibutramine no malaza amin'ny fihenam-bidy?
Ireto misy tranga vitsivitsy izay mety hampijaliana ny lorcaserin. Ny dosie avo dia mety hahatonga ny mpampiasa hahatsapa "avo" ary hampientanentana ny ho avy. Izany dia fahazarana mahazatra ary mety hiteraka fitsaboana zava-mahadomelina izany. Noho io antony io, ny Fitondran'ny Fampiharana ny Fampiharana ny zava-mahadomelina dia nanamarika izany ho toy ny foto-kevitra IV.
Fandaharan'asa manokana rehefa misy fanafody miteraka herisetra
Alohan'ny handraisana an'i Lorcaserin (Belviq)
Ampahafantaro ny dokotera raha tsy mahazaka fanafody ianao. Miaraka amin'ny fanampian'ny mpitsabo mpanampy iray, fanamafisana avy amin'ny boky torolàlana raha toa ka mety hahatonga ny fihetsika tsy mahazatra ny fatrambola amin'ny lorcaserin.
Raha toa ianao ka amin'ny fitsaboana hafa, toy ny dokotera, ny dokotera, ny dokotera, na ny herisetra, dia miantoka ny fampahafantarana ny mpivarotra. Tena zava-dehibe izany satria manampy amin'ny fametrahana ny mety hisian'ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina sy ny fiantraikany amin'ny pharmacodynamic ny lorcaserin ao amin'ny vatana. Vokatr'izany, ny dokotera dia mety ho voatery hanitsy ny fanafody fanafody anti-diabetika ary hitazona fijerena akaiky ny vokatra hafa.
Ny pharmacologically, ny fifandraisana misy eo amin'ny zava-mahadomelina eo amin'i Belviq sy ny fanafody sasany dia mety ho tandindomin-doza. Ny ohatra mahazatra dia fanafody presbytera ho an'ny migraine, ny fahaketrahana, ny hatsiaka, na ny aretina ara-tsaina. Ireto misy lisitra feno amin'ny fanafody sy zava-mahadomelina napetraka eo amin'ny sary;
Tricyclic antidepressants (TCAs) toy ny nortriptyline, trimipramine, protriptyline, amitriptyline, doxepin, clomipramine, amoxapine, na imipramine
Ny serotonin-selveon-selveon-sela (SSRIs) toy ny fluoxetine (Sarafem), sertraline, paroxetine (Paxil), escitalopram, citalopram, ary fluvoxamine
Dextromethorphan (matetika amin'ny fanafody mangatsiaka)
Ny sela Norepinephrine dia miteraka fanafody (SNRI), ahitana venlafaxine (Effexor) sy duloxetin
Ny inhibitors monoamine oxidase (MAOIs) toy ny linezolid, tranylcypromine, methylene manga, isocarboxazid, selegiline, ary phenelzine
Mediam-pihetseham-po mahatsiravina toy ny karakarin'i St. John sy tryptophan
Fitsaboana amin'ny disfunction
Diabe momba ny diabetika toy ny insuline
Mariho fa miteraka lanjany ho an'ny marary be loatra ny rongony. Raha manana diabetes type II ianao, dia tafiditra ao anatin'izany ny siramamy ambany ambany ianao rehefa mandray ilay tableta. Noho izany dia tokony hanara-maso matetika ny siramamy azonao ary hifandray hatrany amin'ny dokotera raha ilaina ny fanovana ny dosage.
Fitsaboana ho an'ny aretina ara-tsaina
Ny zava-mahadomelina ho an'ny aretin'andoha migraine, anisan'izany ny zolmitriptan, sumatriptan, rizatriptan, frovatriptan, almotriptan, naratriptan, ary eletriptan (Relpax)
Codeine (misy amin'ny medikaly sy fanaintainana sasany)
Ny fanampim-panafody hafa
Avelao ny pharmacist hahalala ny sakafo fanampiny, herbs, na vokatra tsy dia misy vidiny azonao.
Ny fiterahana sy ny fikarakarana
Ny mpivady dia toa fahavalo lehibe ho an'ny reny. Ny tabilao fanosotra dia tsy natao ho anao raha efa bevohoka ianao na mikasa ny hitoe-jaza. Ity zava-mahadomelina ity dia mety hanimba ny foetus mitarika amin'ny fetal tsy fetezana. Raha vao fantatrao fa bevohoka ianao rehefa mandray ilay dosie dia alao avy hatrany ny dokotera mba haka torohevitra.
Noho izany, nahoana moa no tena mifanohitra amin'ny Belzika ny vehivavy bevohoka? Satria ny fahavoan'ny ratra dia fandaniam-potoana rehefa bevohoka. Ankoatra izany, ny fandinihana natao tamin'ny raty dia nanambara fa ny zaza dia miaina miaraka amin'ny lanjany ambany vatana mandritra ny androm-piainany manontolo.
Tsy azo atao koa ny mitaiza ny zanakao mandritra ny lorcaserin. Na dia tsy misy tatitra azo antoka aza manazava ny fomba mety handalo ny rononon-jaza sy hanimba ny zaza, dia tsara kokoa ny miaro tena noho ny sorena.
Ny fahasimban'ny tosi-drà sy ny sela
Raha toa ka manana olana saro-pady sy olana ara-pahasalamana mifandray amin'ny selan'ny rà ianao, dia ataovy izay hampahafantarana ny mpitsabo anao. Anisan'izany ireto;
Leokemia (misy fiantraikany amin'ny sela fotsy)
Myelomas maro (ao amin'ny efitranon'ny plasma)
Ny selan'ny sela mpirenireny (manala ny endriky ny sela mena)
Ny tsy fahampian'ny penis (aretina Peyronie, angile, na fibrous cavernosal)
Ny aretin'ny voa
Ny aretin'ny taova
Sakafo sy fanatanjahan-tena
Ampiheno ny kaloria amin'ny sakafo ary miezaha hampihatra tsy tapaka. Raha manao izany ianao, dia manatsara ny fahasalamanao ary manamafy ny fizotran'ny alahelony. Mpikaroka tsara kokoa amin'ny asa atao ara-batana.
Jereo ny siramamy ao amin'ny ra
Raha manana diabeta II ianao, dia mety hiteraka siramamy ambany ny fatran'ny lozokosina. Ampahafantaro hatrany ny tatitra miaraka amin'ny dokotera izay handidy sy hanitsiana ny dosage.
Tohizo ny fanendrena anao amin'ny dokotera
Farafaharatsiny, ny mpitsabo dia hanamarina ny fandrosonao amin'ny zava-mahadomelina, ny fomba enti-manentana ny rafitrao, ary koa manoro anao araka izany.
Fanolorana fanampiny amin'ny Lorcaserin
Mitebiteby ny tabilao lorcaserin manontolo, fa aza mihinana, misaraka, na manimba
Aza mampitombo ny dosage. Ho an'i Belviq, makà takelaka roa isan'andro isan'andro fa ho an'ny Belviq XR, iray monja ny takelaka tokana indray mandeha isan'andro.
Ataovy azo antoka ny manambara amin'ny dokotera anao ny fanafody rehetra, ny fanafody, na ny vokatra azonao alohan'ny fotoana na amin'ny Belviq
Atsaharo ny fampiasana lorcaserin raha toa ka tsy nahatratra 5% ny fahaverezan'ny lanjany taorian'ny herinandro 12
Aza atao fitaovana mampidi-doza na mitondra fiara, satria mety hanelingelina ny fifantohana, ny fahatsiarovana, ary ny fahafahana mifantoka ny fanafody. Manao izany fotsiny raha resy lahatra ianao fa tsy misy fiantraikany amin'ny toe-tsainao ny mpifankatia
Aza mitondra ny fanafody raha bevohoka ianao
Fantaro ireo loza mety hitranga amin'ny fiterahana, ny fiantraikany eo amin'ny sehatra, ny fanehoan-kevitry ny fiainana, ary ny tombontsoa. Raha toa ka mihamafy ny soritr'aretina dia miantsoa ny dokotera
Mazava ho azy, aza misalasala rehefa mampinono
aza mampiasa lorcaserinin fampiarahana amin'ny fanafody serotonergika, dopamine mpanohitra, na fanafody hafa amin'ny sakafo toy ny tryptophan. Ny fifandraisana misy eo amin'ireo zava-mahadomelina ireo dia mety miteraka aretina serotonin na soritr'aretina mitovy amin'ny aretin'ny neuroleptika malemy (NMS).
Raha manana olana saro-pady ianao dia miresaha amin'ny mpitsabo anao mialoha ny fanalana ny rongony fidiram-bola lorcaserin
Ity fanafody ity dia natao hamporisihana ny marary sy ireo olona be loatra izay manana BMI farafaharatsiny 27kg / m2ary ny comorbidity mifandraika amin'ny lanjany.
Aza mandray lorcaserin raha matavy ianao fa mbola kely taona eo ambany 18 taona
Aza mizara ity pilina ity amin'ny olon-kafa
Fampitandremana ara-pahasalamana sy fanadinadinana
Mitondrà solom-bolo amin'ny fiheveranao manokana na amin'ny fampitandremana faran'izay tsara raha manana ireto fepetra manaraka ireto ianao;
Ady amin'ny aretin'ny havokavoka
Ny mararin'ny zaza amam-behivavy
Fijerena ny fahatsapana amin'ny fanasiana lorcaserin
Ny tantaran'ny bradycardia (taham-paharetan'ny fo <50BPM)
Rahoviana ny hampitsahatra ny fandraisana lorcaserin;
Raha toa ka mampitombo ny mari-pamantarana ny valin'ny fo sy ny tsy fahombiazan'ny fo
Amin'ny fanehoan-kevitra mivaivay sy ny soritr'aretina mafy
Nandritra ny fitondrana vohoka
Raha toa ka tsy miasa ny fanafody, dia tsy afaka mahatsikaritra ny fahasamihafana aorian'ny efa-bolana
Rehefa manoro hevitra anao ny mpitsabo anao
Ny zava-mahadomelina dia misy fiantraikany eo amin'ny isa misy anao, anisan'izany ny sela fotsy, ny leokocytes, ny lymphocytes, ary ny neutrocytes
Fihetseham-po, hevitra, na fihetsika mamono tena
Raha sendra tafahoatra
Vokatry ny fiterahana
Tahaka ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina, ny lorcaserin dia mety miteraka vokatra hafa. Na izany aza, ny sasany amin'ireto soritr'aretina ireto dia mety ho vetivety ary mety hanjavona rehefa mihatra amin'ny zava-mahadomelina ny vatanao. Raha mitohy ny vokany dia mitadiava avy hatrany ny mpanamboatra anao.
Fahazavana madinika nefa kely
Matetika, mahatsiravina, na sarotra ny fanadiovana
Ny fiovan'ny fahitana toy ny hafanana
Diso torimaso toy ny fahasarotana amin'ny fijanonana na mijanona
Ny fihenan'ny muscle
Reraka na reraka
Ireo soritr'aretina mahery
Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy, mety hanjary henjana ny vokatra hafa, noho izany, miantso ny fitsaboana ilainy. Anisan'izany;
Fihetsiketsehana (mahita na mandre ny zavatra tsy misy)
Miova tampoka ny fihetseham-ponao
Hozary, henjana, na fitifirana
Amnesia (faharetan'ny fahatsiarovan-tena)
Hevi-po sy fikasana hamono tena
Ny tanana mivelatra, ny tongotra, ny tongotra, na ny tanany
Tsy mety ny fo (fast or slow)
be fisalasalana toy
Zava-tsarotra amin'ny fandrindrana
Fihetseham-pahaizana (eo ivelan'ny vatanao)
Fampivoarana ny totozy indrindra amin'ny lehilahy
Ny tsiranoka miloko avy amin'ny tratra noho ny fisondrotry ny prolactine
Priapism (fananganana maharitra sy maharary maharitra mihoatra ny adiny enina)
Na dia niezaka nanararaotra ny soritr'aretina rehetra sy ny vokatry ny pilotra lorcaserin aza ianareo, dia mety hiaina zavatra mety tsy ho ao anatin'io lisitra etsy ambony io. Na izany aza, io ihany no mitranga amin'ny fotoana mahatsikaiky.
Amin'ny toe-javatra faratampony, miantoka antoka ny hitatitra ny vokany Fandefasana tatitra amin'ny aterineto an'ny FDA. Ny famelabelaran-kevitra mety aminy dia 1-800-332-1088.
Tehirizo ity fanafody ity ao anaty fitoeram-pandaminana voajanahary, indrindra ao anaty sambo izay miditra ao. Arovy amin'ny hafanana sy ny hafanana tafahoatra. Na dia tsy misy mari-pamantarana manokana aza, dia azo ekena ny sandan'ny fari-pitsipika. 25 ° C dia tonga lafatra fa misy ny 15 - 30 ° C dia mbola tsara foana.
Tandremo ny lanjan'ny lozam-piarakodia lozisialy amin'ny toerana azo antoka mba hisorohana ny fidirana amin'ny olona tsy nahazo alalana. Mariho fa ny fanafody dia vatana voaaro ary mety ho voaolana. Ankoatra izany dia mety ho poizina amin'ny ankizy na olona hafa mandray izany raha tsy misy dokotera dokotera.
Tsara ny fanesorana an'i Lorcaserin
Avelao ny lorcaserin ho fako fambolena araka ny FDA, EPA, ary ny DEA. Aza milentika ao amin'ny efitra fidiovana, avelao hivoaka eo amin'ny rano izy, na esorina amin'ny fako. Ny tsy mety levona amin'ny rano, ny lorcaserin dia mety miteraka fahalotoana.
Misy fomba maro handosirana ny zava-mahadomelina. Raha vantany vao fantatrao sy apetaho tsara ny fanafody dia azonao ampiasaina ny programa fanafody fitsaboana, izay tafiditra amin'ny famerenana azy amin'ny mpanamboatra. Raha toa ka tsy azo atokisana ilay fandaharana dia mahazo fanampiana avy amin'ireo orinasa mpitrandrahana alalana amin'ny alàlan'ny lisansa izay handoro ny vokatra na handevina azy amin'ny alàlan'ny fandefasana solika.
Fanamarihan'ny mpivarotra avy amin'ny Obeses
Ny olona sasany dia tao Belviq nandritra ny enim-bolana monja saingy afaka nahita fiovana lehibe izy ireo. Ohatra, efa efa very 20lbs ny mpampiasa alohan'ny fampiasana ny fanafody mandritra ny taona iray manontolo. Averagely, ny antsasak'ity vahoaka ity dia very vola 10 tao anatin'ny volana voalohany.
Na dia mpanavotra ny maro aza dia toa tsy mahomby amin'ny vitsy an'isa ny mpampihorohoro. Na izany aza dia mety iray volana monja no hamoy ny 3lbs fotsiny, ny sasany dia tsy manoratra ny valin'ny lorcaserin voamarina. Mifanohitra amin'izany kosa, nahatsapa fa nihanitombo ny filan-dry zareo.
Ny voka-dratsiny dia mihodina!
Ny 90% amin'ireo izay nahavita volana iray monja raha nandray lorcaserin dia olona mahatsiaro mahatsiravina avy amin'ny vokatra hafa. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mandefitra ny tsy fahitan-tory, ny tebiteby, ny aretim-po, ny hatezerana, ny fitabatabana, ny hafetsena, ary ny fo tsy miangatra.
Na dia mahatsapa ny soritr'aretina aza ny ankamaroan'ny olona dia marobe ireo mpampiasa no nanamarika fa ny vokany dia tsy ela. Amin'ny ankapobeny, dia mety ho hita ao anatin'ny tapa-bolana voalohan'ny handray ny lorcaserin. Mahaliana fa manodidina ny 2% ny mpanjifa dia tsy nisy vokany.
Avy amin'ny fanamarihan'ny lorcaserin, ny 88% tamin'ireo mpampiasa dia nanaiky fa nihena be ny fiteniny satria nanomboka nampiasa lorcaserin. Mahasoa ho an'ireo izay manana faniriana hafahafa sy mpihinana fihetseham-po mampihetsi-po. Raha misy fampitahana eo anelanelan'ireo ampahany izay nihinana teo aloha sy ny fihinanan'izy ireo izao, dia ny antsasak'izay dia ny antsasany na latsaka. Olona vitsivitsy aza dia mety hanery ny tenany hihinana satria mety hanjavona mandritra ny andro maromaro ny faniriana hisakafo.
Olona vitsivitsy izay tsy nisy fiantraikany teo amin'ny fiankinan-doha dia nanaporofo fa niasa ho azy ireo lanja hafa. Ho an'ny sasany, ny fampidirana ny fampiharana ao amin'ny fandaharam-pihenany dia nitombo bebe kokoa tamin'ny fananana lanjany fa tsy niankina tamin'ny fiankinan-doha ambany.
Ny famatsiana andro 30 dia mandeha ho an'ny 330 bucks. Ny sasany amin'ireo fiantohana dia tsy mamela ny vidin'ny fividianana ny fanafody. Amin'ny tranga toy izany, ny iray dia miankina amin'ny tapakila amin'ny mpanamboatra sy karatra fihenam-bidy na mikaroka lalindalina kokoa eo amin'ny paosiny. Rehefa ampy ny fotoana, dia afaka mandoa kely ny $ 50 ianao.
Raha toa ka manao latsaky ny $ 15,000 isan-taona ianao, dia tsara kokoa ny mampitandrina ny vatanao mba tsy ho be loatra. Ny drafitra fitantanana mavesatra dia fomba iray azo antoka handroahana ny kaontinao.
Fintino ny soritraretina
Ny mpitsabo dia afaka mampiditra anao ho mpidoroka amina alina amin'ny fampidirana azy amin'ny rafitrao. Ireo izay mijanona amin'ny fitsaboana dia mety hiaina ny fiantraikany.
Lorcaserin dia fitambarana simika ampiasaina amin'ny fitsapana ara-pitsaboana, fampiasana fitsaboana, ary ny fisian'ny fanafody manohitra ny fiterahana. Ny hydrochloride ao Lorcaserin dia miforona rehefa mamaly amin'ny asidra saline ny lorcaserin.
Io fanafody io dia natao ho an'ny laboratoara ho an'ny fikarohana. Tsy azo antoka ho an'ny fampiasan'ny olona na ny biby izany.
Ny mpivady dia misy marika famantarana roa. Azonao atao koa buy lorcaserin levitra tahaka ny takelaka Belviq® na Belviq XR®. Ny singa mavitrika amin'ny marika roa dia lorcaserin hydrochloride.
Ity fanafody mampidi-doza ity dia tabila 10mg izay tokony halaina indroa isan'andro. Izy io dia endrika boribory, manga, manga ary sarimihetsika miaraka amin'ny 'A' amin'ny andaniny sy ny '10' eo amin'ny farany mifanohitra. Ny tavoahangy tsirairay dia manana takelaka 60.
endrika Round; biconvex
Fitsipika an-tsoratra A; 10
Tontalin'ny tavoahangy Takelaka 60
Loksamboaramy hydrochloride hemihydrate
Ireo solon-tena ireo dia miverimberina amin'ny fanesorana ireo ingredients tompon'andraikitra amin'ny fanehoan-kevitra mivaingana sy ny vokatra hafa, indrindra mandritra ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina.
Ity dia takelaka 20mg manafangona indray mandeha indray mandeha isan'andro. Tsy tahaka an'i Belviq®, ity marika ity dia manome takelaka orange. Na izany aza, izy ireo koa dia boribory, biconvex, sarimihetsika sarimihetsika, ary voasokitra amin'ny 'A' amin'ny andaniny ary '20' eo amin'ny farany mifanohitra. Ny tavoahangy Belviq XR® dia manana takelaka 30.
Fitsipika an-tsoratra A; 20
Tontalin'ny tavoahangy Takelaka 30
Buy Lorcaserin levitra Online
Lorcaserin levitra vola lany
Ny vidin'ny lorcaserin hydrochloride (846589-98-8) miankina amin'ny toerana misy anao, ny fivarotan-tseraseranao ary ny habetsaky ny fanontaniana. Ohatra, ny miligraman'ny vokatra dia handoa anao mihoatra ny $ 50. Na izany aza, ny fandehanana be dia be dia mety hampihenana ny vidin'ny 1g isaky ny dollar na zavatra hafa.
Ny tavoahango Belviq misy kapila 60 (Belviq XR® dia manana tabilao 30) dia haharitra iray volana eo ho eo ary mandany $ 220 sy $ 330. Ny vidiny dia miankina amin'ny pilina lorcaserin izay azonao hatramin'ny Belviq XR® mandoa vola vitsivitsy mihoatra noho ny Belviq. Ny orinasam-piantohana sasantsasany dia mety handrakotra ampahany amin'ny fiampangana, ka hamela anao amin'ny vola mandoa vola. Ankoatr'izany, afaka mahazo tapakila manokana sy karatra fihenam-bidy avy ao Belviq ianao, izay mahatonga anao handoa vola.
2. Ahoana no hividianana ny mpivarotra levitra
Ny fividianana ny fividianana Belviq dia lalàna FDA izay mitaky anao hanana dokotera dokotera. Na izany aza, tsy misy famerana ny fividianana lolcaserin, ankoatra ny maha-matihanina anao eo amin'ny sehatry ny fikarohana.
Ny ankamaroan'ny fivarotana an-tserasera dia mitaky anao hanoratra kaonty amin'izy ireo, mamorona vavahadinao manokana, ary mijery ny vidin'ny vidiny. Afaka ampidirinao ao anaty sarintany ny habetsahanao ary mametraha baiko. Tsy misy fiampangana manokana entana satria ny HCC dia tsy misy fiarovana amin'ny fomba fitaterana rehetra.
Moa ve ny mpitandro filaminana mifehy?
Na dia tsy mahasalama aza, dia mety hahatonga ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina sy ny fanararaotana ny lorcaserin. Izany no antony nanoritsoran'ny fitondrana ny fampiharana ny fampiharana ny zava-mahadomelina (DEA) eo ambanin'ny Lalàna IV amin'ny Lalàna mifehy ny ady.
Ahoana àry no fomba hifehy ny dosage? Hanazava aho. Mety ho tratra ny overdose, nefa mety ho fihetsika an-tsitrapo koa ny fanentanana ny mpampiasa. Mba hamoahana ny fandriam-pahalemana dia azonao atao ny mamerina manara-pitsipika kely fotsiny.
Ny voka-dratsin'ny lorcaserin sasany dia ahitana ny fampidirana am-ponja, ny fahatsapana "avo", ny famitahana na ny hafaliana. Indraindray, marary maromaro no nampiato ny doka. Ireo porofo rehetra ireo dia porofo ampy ahafahan'ny fitsaboana miteraka fiankinan-tsaina.
Azonao atao ve ny mivoaka rehefa maka lorcaserin?
Ny fahombiazan'ny lorcaserin dia mifamatotra amin'ny fihetsika ara-batana sy ny tsimokaretina ambany kalorie. Raha mbola maka lorcaserin ianao, dia tokony ho fomba fiainanao ny fampiofanana tsy tapaka. Ny ampahany amin'ireo izay nampiasa azy io dia mino fa ny fampiharana dia manana anjara lehibe amin'ny lanjan'ny dia fahavoazana fa tsy miankina fotsiny amin'ny fanafody.
Manana risika amin'ny vatanao ve ny mpampihorohoro?
Na dia tsy dia lehibe loatra aza ny voka-dratsin'ny sasany, ary mety hanjavona aorian'ny herinandro na roa, mety ho lasa matotra ny sasany ary lasa atahorana ho faty. Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny fanehoan-kevitra mampidi-doza dia tsy manana firy ny fisehoan-javatra. Noho izany dia sarotra ny maminavina ny faharetany.
Ny fanadihadiana lehibe amerikana dia tsy nanala ny fitarainana momba ny loza mety hiteraka aretina mifandraika amin'ny lorcaserin fa ny vaovao hita ihany koa. Ity misy fijery momba ny risika lorcaserin;
Izany dia rehefa maka Belviq miaraka amin'ny fanafody, izay mampitombo na mampiasa aktivina serotonin. Anisan'ireny fanafody ireny ny fitsaboana, ny olana ara-tsaina, ny alahelo, ary ny hatsiaka.
Ny siramamy tsy latsaka ambany dia tsy natao afa-tsy amin'ny olona voan'ny diabeta type II. Mety hampidi-doza ny fiainanao raha tsy mahavita manara-maso ny siramamy ianao ary manitsy ny fanafody diabeta.
Ny fako mpihinam-bary dia mety hiteraka fahasimban'ny fo noho ny fampidinana ny 5-HT2B mpandray. Na dia izany aza, misy fiantraikany kely izany vokatra izany satria manana fifandraisana ambony kokoa amin'ny 5-HT ny zava-mahadomelina2C noho ny mpanolo-tsaina 5-HT hafa. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny isan-jaton'ireo izay maka lorcaserin sy ny vondrona eo amin'ny plasebo dia tsy hisy fiantraikany lehibe amin'ny fitsapana amin'ny aretim-pisefoana.
Fanafihana maharary izay maharitra maharitra efatra ora. Raha tsy voatsabo dia mety hitarika maharitra amin'ny tenda.
Hatraiza ny lanjako ho very amin'ny lorcaserin?
Raha toa ianao ka mampiditra fikarakarana ara-batana sy sakafo ara-pahasalamana eo amin'ny fomba fiainanao, dia mety ho very faran'izay betsaka ianao. Amin'ny herinandro 12, tokony ho very 5% ny lanjan'ny vatanao. Rehefa tsy mitranga izany, tsy misy fanantenana an'i Belviq miasa ho anao.
Avy amin'ny fanamarihan'ny lorcaserin azonay samirery, dia nitatitra ny ankamaroan'ny olona fa very teo anelanelan'ny 10 - 15lbs tamin'ny volana voalohany.
Efa nanandrana an'i Belviq ve ianao na fanalàm-baraka toy izany?
Ny 90% amin'ny fanamarihan'ny mpampiasa dia manaporofo fa miasa ny lorcaserin. Ho an'ny vahoaka sisa, ny fanafody dia mety niteraka adihevitra ratsy na tsy nahomby. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny dokotera dia hampijanona ny dosageo ary manolotra fanafody mahazatra hafa.
Raha tsy nahavita niasa ho anao ny olona iray, dia misy safidy hafa azon'ny mpampiofana azonao atao. Amin'izao fotoana izao, ny FDA dia nankato ny phentermine (Qsymia), orlistat, naltrexone (manonona), ary liraglutide.
Summary On Lorcaserin levitra (Belviq)
Ny fidiram-bolan'ny lozam-pifamoizana Lorcaserin dia natao ho an'ireo marary miboridana sy be marary, indrindra fa ireo izay mijaly noho ny firaisana ara-boajanahary. Ny fanafody dia miteraka aretina maro ary misy fiantraikany ratsy eo amin'ny vatana, fa rehefa manaraka ny torohevitry ny dokotera ianao dia ho eo amin'ny lafiny azo antoka.
Ny mpivady dia mitaky ny hanohizanao mampiasa azy mandritra ny androm-piainany manontolo na amin'ny alalan'ny prescription. Raha manolotra fialan-tsasatra aorian'ny taona iray amin'ny famoanana 20lbs ianao, dia vonona ny hahazo tombony toy izany miaraka amin'ny vola fanampiny.
Na dia lafo be aza, mila mampiasa ny tahiry, ny tapakila ary ny karatra fihenam-bidy hita ao amin'ny tranonkala Belviq ianao. The lorcaserin cost dia hampihena ihany koa raha miantoka ny ampahany amin'ny fiampangana ny fiantohana. Tsara ny mandanjalanja ny loza mety hitranga sy ny tombontsoa ara-pahasalamana alohan'ny fandaniana $ 300 amin'ny prescription iray isam-bolana.